Raha izaho no Andriamanitra, dia ny Fiangonana Eran-tany manerantany Switzerland (WKG)
Raha ny marina, indraindray dia sarotra amiko ny mahazo an’Andriamanitra. Tsy mandray ny fanapahan-kevitra raisiko foana izy raha eo amin'ny toerany. Raha Andriamanitra aho, dia tsy avelako hisy orana izao eny an-tsaha. Ireo tantsaha mpiompy tsara sy manao ny marina ihany no mahazo orana amiko, nefa milaza ny Baiboly fa Andriamanitra nandatsaka ny ranonany amin'ny marina sy ny tsy marina (Matio 5,45).
Raha izaho no Andriamanitra dia ny olon-dratsy ihany no ho faty maty ka ny tsara fanahy kosa hiaina fiainana sambatra. Nefa milaza ny Baiboly fa indraindray mamono ny olo-marina Andriamanitra, satria noheverina ho afa-mandositra ny ratsy izy ireo (Isaia 57, 1). Raha Andriamanitra aho, dia ampahafantariko foana ny rehetra fa tokony hitranga izay ho avy amin'ny ho avy. Tsy misy fanontaniana hoe inona no eritreritro momba ny zavatra iray. Halamina tsara sy mora azo ny zava-drehetra. Nefa ny Baiboly milaza fa Andriamanitra ihany no mamela antsika hahita amin'ny alàlan'ny fitaratra feno rahona (1 Korintiana 13, 12). Raha Andriamanitra aho, dia tsy hisy fampijaliana eto amin'ity tontolo ity. Nefa Andriamanitra milaza fa tsy azy ity tontolo ity, fa an'ny devoly, koa noho izany dia tsy mifanelanelana lalandava izy ary avelany hitranga ny zavatra tsy takatry ny saintsika (2 Korintiana 4, 4).
Raha izaho no Andriamanitra dia tsy enjehina ny kristiana aorian'izay rehetra manandrana manaraka an Andriamanitra ary manao izay asainy ataony. Fa ny Baiboly milaza fa izay manaraka an Andriamanitra dia henjehina (2 Timoty 3:12).
Raha izaho Andriamanitra dia ny fanambin'ny fiainana dia ho sarotra ho an'ny rehetra. Nefa ny Baiboly dia milaza fa ny tsirairay avy amintsika dia miady amin'ny zavatra samihafa ary ny tolona ataontsika dia tsy azo hokapohina na olon-kafa. (Hebreo 12: 1)
Ka tsy resaka momba izany izy io, fa momba azy irery ihany ary izany no tokony hitandremantsika an'i Jesosy (Hebreo 12, 2). Tsy mora foana ny manaraka io antso io, nefa mbola safidy tsara kokoa noho ny mino fa hanao zavatra tsara kokoa noho Andriamanitra aho.